इन्टरनेट | Nepali Virals
अप्रिल 18, 2016 | टेक्नोलोजी, समाज, हट टपिक्स
इन्टरनेट यतिखेर हामी सबैको आवश्यकता बनिसक्यो। यदी इन्टरनेटसँग जोड्न पाइएन भने मोबाइल, कम्प्युटर जस्ता उपकरण हाम्रा लागी कामै नलाग्ने हुन्छन्। इन्टरनेट यतिखेर अत्यावश्यक आवश्यकता बनिसक्यो। पश्चिमा देशमा त इन्टरनेटलाइ कार चलाउनु जत्तिकै दैनिक आवश्यकताको कुरा मानिन थालिसकेको नै धेरै भइसकेको छ। नेपालमा पनि इन्टरनेट आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको छ। घर देखि अफिस छोडौं यीनमा त जमाना देखी नै इन्टरनेट जोडीएका हुन्। अब बस र सार्वजनिक स्थलमा समेत इन्टरनेटको सिग्नल उपलब्ध छ। केबल अर्थात तारको माध्यम नभएर हावामा तरंगको रूपमा रहेका सिग्नलले तपाईं हामिलाई इन्टरनेटसँग जोड्न थालेको छ। काठमाडौं मात्र नभएर देशका कुनै पनि गाउँ, बजार अनि शहरका चोकमा उभिएर मोबाइल वा कुनै पनि हाते डिभाइसको वाइफाई अन गर्नुस् कम्तिमा पनि चार देखी पाँच वाइफाईका नेटवर्क (एसएसआईडी) देखा पर्छन्। तर तपाईं ती नेटवर्कमा जोडिएर इन्टरनेट चलाउन भने सक्नुहुन्न।
तपाईको मोबाइल/ल्यापटपमा वाइफाईको सिग्नल देखिन्छ तर पासवर्ड नभएर वाइफाई चलाउन पाइराख्नु भएको छैन भने तपाईलाई त्यस्ता नेटवर्कबाट इन्टरनेट चलाउन सक्ने बनाउने ट्रिकहरू पनि छन्। सामान्य त तपाईं हामी सबैले विभिन्न पासवर्डहरू हानेर चल्छ कि भनेर प्रयास पनि गर्छौं तर इन्टरनेटको नेटवर्क हावामा छोड्नेहरू पनि कम चलाख छैनन्। कडा र सुरक्षित पासवर्ड राखेर छोडेका हुन्छन। पत्ता लगाउन नै गाह्रो। तर त्यस्ता समयमा अरूको इन्टरनेट चलाउन सकिने गरी बनाइएका केही एप छन् मोबाइल उपकरणका लागी जसले तपाईंलाई आफ्नो मोबाइलमा देखिएका वाइफाई नेटवर्कबाट इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुन्छ। यी केही यस्त एप्सहरु हुन् जसको प्रयोग गरेर निर्धक्क वाइफाईको पासवर्ड पत्ता लगाउन सक्नु हुन्छ ।
यी हुन् वाइफाईको पासवर्ड पत्ता लगाउने ५ एप्स
१- ह्याक वाइफाई पासवर्ड
यो एप पनि गुगल प्लेमा निशुल्क उपलब्ध छ । यसले केही सेकेण्डमा बाइफाइ पासवर्ड पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ । यसलाई इन्स्टल गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
थप यहाँबाट हेर्नुहोस्
क्यान इन्फोटेकका ५ आकर्षण
जन 31, 2016 | समाज
राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सूचना प्रविधिको कुम्भमेला क्यान इन्फोटेक चलिरहेको छ । मेलाको दोश्रो दिनसम्ममा १ लाख २४ हजार ३ सय ८२ जनाले अवलोकन गरिसकेका छन् । इन्फोटेकमा सहभागि कम्पनीहरुले नयाँ नयाँ प्रविधिजडित उत्पादनहरु आकर्षक स्किमका साथ सार्वजनिक गरेका छन । विशेष गरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक स्टलहरु, नेपाल टेलिकम, स्मार्टफोन र ट्याब्लेटका स्टलहरु, ल्यापटप, कम्प्युटरका स्टलहरु, इन्भर्टर तथा ब्याट्रीका स्टलहरु, सफ्टवेयर तथा एन्टिभाइरसका स्टलहरु, फोटोकपी, प्रिन्टर, प्रोजेक्टर, स्क्यानर, एटेन्डेन्स मेशिन, राउटर, सिसिटिभी लगायतका स्टलहरु आकर्षणको केन्द्र बनेका छन ।
प्रदर्शनीमा हार्डवेयर सेल्स तथा मेन्टीनेन्स्, पावर सोलुसन्स्, मोवाईल एसेसोरिज, डिलर र डिस्ट्रिव्युटर्स, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, टेलिकम्युनिकेशनस्, आईसीटी कलेज तथा ट्रेनिङ्ग ईन्स्टिच्युटस्, सफ्टवेयर सोलुसन्स्, पेमेन्ट सोलुसन्स् लगायत गरी ११२ कम्पनीका १८८ स्टल रहेका छन । हामीले इन्फोटेकमा भएका ५ आकर्षण प्रस्तुत गरेका छौं जहाँ अवलोकनकर्ताहरुको दैनिक जसो भिड लागेका छन् ।
१. इन्टरनेट सेवा प्रदायक स्टलहरु
प्रविधी आधारभूत माध्यम भएर पनि होला इन्फोटेकमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका स्टलहरु अवलोकनकर्ताहरुले घेरिएका छन् । सुविसु केवलनेटले क्लियर टिभी अफर, केवल इन्टरनेट एण्ड क्लियस टिभी कम्बो अफर, फिफ्ट ईन्टरनेट एण्ड क्लियर टिभी कम्वो अफर ल्याएको छ । क्लियर टिभी अफर अन्तर्गत ९ हजार ७ सय ३५ रुपैंया पर्ने प्याकेजलाई ३ हजार ९ सय ९९ रुपैंयामा उपलब्ध गराएको छ । साथै टिभी सेट– टप बक्स निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै १४ हजार ९ सय ८१ रुपैंया पर्ने प्याकेजलाई केवल इन्टरनेट एण्ड क्लियर टिभी अफर अन्तर्गत ६ हजार ४ सय ९९ रुपैंयामै उपलब्ध गराएको छ ।
यसमा पनि केवल मोडियम डिभाइस, क्लियर टिभी सेट– टपबक्स निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ । त्यसैगरी वेबसर्फरले ट्रिपल डाटा अफर, निःशुल्क जडान ४ जिवी सम्म टपअप सुविधा ल्याएको छ । त्यस्तै वल्र्डलिंकले पनि ट्रिपल डाटा अफर, नगद छुट, एक वर्षे प्याकेजमा वेबक्याम तथा हेडफोन निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ । भायनेटले ४ हजार ९ सय ९९ रुपैंयामा ईन्टरनेट प्याकेज उपलब्ध गराउनुका साथै निःशुल्क जडानको सुविधा प्रदान गरेको छ । त्यस्तै नेपाल टेलिकमको वाइम्याक्स लगायतमा पनि अवलोकनकर्ताहरुको आकर्षण बढेको पाइयो ।
२. स्वस्तिकको सिसिटिभी
इन्फोटेकमा स्वस्तिक डिष्ट्रिब्युटर्सले सार्वजनिक गरेको विभिन्न फिचरजडित सिसिटिभीहरु अवलोकनकर्ताहरुको नजरमा परयो । कम्पनीले ल्याएको सडकमा गुडेको सवारीको स्पिड जानकारी दिने तथा यात्रुहरुको गणना गर्न सकिने सिसिटिभी, घर बाहिरबाटै मोबाइल फोनमार्फत घरको झ्याल ढोका खोल्न बन्द गर्न सकिने आइपी वेश डोर एक्सिस कन्ट्रोल सिष्टम तथा सामुदायमा आधारित सिसिटिभीप्रति अवलोकनकर्ताहरुको आकर्षण देखियो । यो सिसिटिभी प्रतिघर १० देखि १५ हजार शुल्कमा धमाधम बुकिङ भैरहेको छ ।
३. लोडसेडिङको विकल्प
इन्फोटेकमा रहेका लोडसेडिङका विकल्पका रुपमा आएका विभिन्न उत्पादनहरुप्रति अवलोकनकर्ताहरुको झुकाव बढ्दो छ । लोडसेडिङको अन्धकारबाट मुक्त हुन जेनेरेटर, ब्याट्री, सोलार, युपीएस, चार्जिङ बल्व लगायत खोज्दै ईन्फोटेक पुग्नेहरुको संख्या बढ्दो छ ।
६. एण्टिभाइरस तथा मोबाइल/ इन्टरनेट सेक्युरिटी
फाल्कन इन्टरनेशनलले पहिलो पटक नेपालमा भित्र्याएको बुलगार्ड इन्टरनेट सेक्युरिटी, एण्टिभाइरस तथा मोबाइल सेक्युरिटी पनि अवलोकनकर्ताहरुको नजरमा परयो । यसको ईन्टरनेट सेक्यूरिटीको मूल्य एक हजार, एण्टिभाइरसको मूल्य ५ सय र मोबाइल सेक्यूरिटीको मूल्य ३ सय ५० रुपैया रहेको छ । कम्पनीले इन्फोटेकमा बुलगार्डका कुनै पनि प्रडक्ट खरिद गर्दा मोबाइल सेक्यूरिटी निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै क्याक्पेरेस्की लगायत विभिन्न कम्पनीका एण्टिभाइरस तथा इन्टरनेट सेक्यूरिटीहरुहरुका स्टलहरु पनि भरिभराउ देखिन्छ ।
५. वाइफाइजडित क्यामेरा, स्मार्टफोन र एसोसरिज
इन्फोटेकको अर्काे आकषर्ण रहेको छ वाइफाइजडित क्यामेरा, स्मार्टफोन र एसोसरिज । एइइको वाइफाइ जडित क्यामेरा, ड्रोन र रेकर्डरले धेरैकौ ध्यान खिचेको छ। त्यस्तै पावर बैंक, मेमोरी कार्ड, पेनड्राइभ, हेडफोन, जस्ता साना एसोसरिजका स्टलहरु अवलोकनकर्ताहरुको नजर छ। स्मार्टफोन, ट्याब्लेटहरूमा माइक्रोम्याक्स, डिटिसी, प्रेष्टिजिओ, किभी लगायतका स्टलहरु आकर्षणको केन्द्र बन्यो । हुवावेले ल्याएको जि ७ प्लस स्मार्टफोन पनि धेरैको रोजाईमा छ ।
यसरी मेटाउनुस आफूलाई इन्टरनेटबाट
डिस 30, 2013 | टेक्नोलोजी
इन्टरनेट, सूचनाको महामार्ग। यसमा आफूलाई समाहित गर्न जति सजिलो छ यसबाट मुक्त हुन निक्कै कठिन। इन्टरनेटमा राखिएका जानकारी तथा सूचनाहरु मेटाउन निक्कै कठिन हुन्छ। अहिले सामाजिक सञ्जालको विकाससँगै बढेको प्रयोगले त दैनिकी र जिन्दगीमा नै नयाँ जञ्जाल थपेको छ। जसले गर्दा व्यक्तिको गोपनियता पनि संकटमा पर्दै गएको छ। एकातिर सामाजिक सञ्जाल मानिसलाई अल्छि र कामचोर बनाउँदै छन् भने अर्को तिर गोप्यता चुहिएर आर्थिक र भौतिक क्षतिको डर पनि बढिरहेको छ। जसका कारण विश्वभर मानिसहरु आफू र आफ्ना सूचनालाई इन्टरनेटबाट हटाइरहेका छन्। त्यसका लागि सजिलो उपाय तयार पारेको छ हुइजहोस्टिङदिसले। जसलाई अपनाएर तपाइँ आफूलाई इन्टरनेटबाट हटाउन अनि लुकाउन सक्नुहुन्छ।
गुगलबाट जानौं कहाँ जान कति लाग्छ
नोभ 18, 2013 | टेक्नोलोजी
गुगल, तपाइँको मनमा उब्जेका प्रश्नको जवाफ दिने वेबसाइट भने हुन्छ यसलाई। हुन पनि इन्टरनेट सर्च इन्जिन गुगल मनचिन्ते झोली जस्तो छ। जसले जे खोजे पनि मिल्ने। नेपालमा इन्टरनेट चलाउनेहरु अधिकांशको होम पेजका रुपमा नै गुगल सेट भएको हुन्छ। गुगल र फेसबुकको प्रयोग इन्टरनेट कनेक्सन जाँच्नका लागि समेत प्रयोग हुन्छ।
गुगल एउटा र्सच इन्जिन मात्र होइन तपाइँ हामीले यसका विभिन्न सेवाहरु प्रयोग गरिरहेका छौं। इमेज, सामाजिक सञ्जाल, निशुल्क सफ्टवेयरहरु, एनालिटिक्स, विज्ञापन सेवा यस्ता अनेकन सेवा छन्। यी सबै भन्दा बढि चर्चामा रहेको र लोकप्रिय सेवा चाहिँ खोज्ने (र्सच) नै हो। मनमा निस्केका हरेक प्रश्न जवाफका लागि कसैलाई सोधिन्छ भने पहिलो गुगल नै पर्छ। गणितका हिसाब देखी विभिन्न ठाउँका ’boutमा गुगलबाटै जानिन्छ। गुगलको र्सच इन्जिनले पनि तपाइँ हामीलाई चाहिएका सूचना शब्दमा आधारित भएर सकेसम्म मिल्ने नै देखाउँछ। यसमा प्रश्न राख्ने तरिका अनुसार जवाफ पाइन्छ। अहिले सम्म पढाइका अनि विभिन्न स्थानहरुका ’boutमा गुगलमा प्रश्न राखेर त्यसका ’boutमा जान्नु भएको होला कतिपय सफ्टवेयर, वेबसाइट पनि गुगलमा खोज्नु भएको होला।
यति मात्र नभएर गुगलले र्सचबारमा टाइप गरेपछि पैसाको विनिमय दर पनि देखाउँछ। त्यसो त तपाइँ यात्रामा निस्कन लाग्नुभएको छ भने तपाइँलाई कुन ठाउँबाट कहाँ जाँदा कति समय लाग्छ भन्ने पनि गुगलले नै बताइदिन्छ। गुगलमा आफू भएको ठाउँ र जान लागेको ठाउँको नाम टाइप गर्ने हो भने गुगलले ती स्थानबीचको दूरी र यात्रा समय बताइदिन्छ। तपाइँले त्यसका लागि तस्विरमा देखाए जसरी स्थानहरुको नाम टाइम गरेर इन्टर गर्नुपर्छ बस।
जस्ट डिलिट मी
अक्ट 30, 2013 | टेक्नोलोजी
सामाजिक सञ्जाल, यतिखेर इन्टरनेटमा कसैको व्यवसाय चलेको छ भने त्यो यसैको हो। फेसबुकको सिको गरेर नेपालका केही युवाले मात्र होइन विश्वभर फेसबुक जस्तै सामाजिक सञ्जालको निर्माण गर्ने क्रम चलिरहेको छ। पेशा, क्षेत्र, भाषा, धर्म लगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेर फरक फरक खालका सामाजिक सञ्जाल बनाउने क्रम विश्वभर चलिरहेको छ।
यस्ता विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा तपाइँहरुले पनि आफ्नो प्रोफाइल बनाउनु भएकै होला। हाईफाइभ देखी बक्स अनि अम्याजन देखी आस्कएफएम ब्लगर अनि बिट्ली सम्म। यस्ता विभिन्न साइटहरुमा तपाईलाई एकाउन्ट खोल्न निक्कै सजिलो हुन्छ तर एकाउन्ट डिलिट गर्ने ठाउँ भने पत्ता लगाउन गाह्रो नै हुन्छ। धेरै वेबसाइटहरुले त डिलिट गर्ने स्थान नै लुकाएर राखेका हुन्छन्। ’cause कुनै पनि वेबसाइट चाहँदैनन् कि वेबसाइटमा आएका मानिसहरु फिर्ता जाउन्। ’cause त्यसले उनीहरुको व्यवसायमा घाटा पर्छ।
तपाइँले सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य कुनै वेबसाइटमा बनाएका आफ्नो एकाउन्ट डिलिट गर्न सकिरहनुभएको छैन वा डिलिट गर्ने लिंक भेटिरहनु भएको छैन भने तपाइँलाई सहयोग गर्नका लागि एउटा वेबसाइट छ जस्टडिलिटमी।
यो वेबसाइटले तपाइँले एकाउन्ट डिलिट गर्न चाहेको वेबसाइटको एकाउन्ट डिलिट गर्ने सुविधाको लिंकमा नै पुरयाइदिन्छ। त्यसपछि तपाइँ एक क्लिकमा नै तपाइँको एकाउन्ट डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यस वेबसाइटको होम पेजमा नै तपाइँले एउटा सर्चबार देख्नुहुन्छ जहाँ तपाइँले आफूले डिलिट गर्न चाहेको एकाउन्ट रहेको वेबसाइट खोज्न सक्नुहुन्छ।
होमपेजमा नै तपाइँले विभिन्न वेबसाइटका नामहरु रातो, हरियो, पँहेलो र कालो रंगका बट्टाहरुमा देख्न सक्नुहुन्छ जसले ती साइटमा रहेका एकाउन्ट डिलिट गर्न कत्तिको सजिलो छ भन्ने देखाउँछ।
आफूलाई आवश्यक नलागेका सामाजिक सञ्जाल तथा वेबसाइटका एकाउन्ट तथा तीनमा रहेको आफ्नो प्रोफाइल डिलिट गर्नका लागि यहाँबाट जानुहोस्।
तपाइँ यदी इन्टरनेट ब्राउजर गुगल क्रोम चलाउनु हुन्छ भने यसलाई आफ्नो ब्राउजरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट जानुस